सुशासनको प्रत्याभूत हुनेगरी जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्नुस् : मेयर जिसी – Gandaki Voice
Home/गण्डकी/सुशासनको प्रत्याभूत हुनेगरी जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्नुस् : मेयर जिसी
सुशासनको प्रत्याभूत हुनेगरी जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्नुस् : मेयर जिसी
गण्डकी भ्वाइस Send an email December 25, 2020
पोखरा, १० पुस ।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले सुशासनको प्रत्याभूत हुने गरी, जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न वडाध्यक्ष र सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा बैठकमा उनले स्वच्छ प्रणालीको विकास गरी वडा कार्यालयहरुका समस्या समाधान गर्ने कार्यमा आफू लागिपरेको स्पष्ट पारे । वडाहरुले खेप्दै आएको आर्थिक व्यवस्थापनको समस्या केही दिनभित्रै समाधान हुने उनले बताए ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय र राष्ट्रबैंकले महानगरका वडाहरुमा खाता सञ्चालनको अनुमति दिइसकेकाले विगतको जस्तो समस्या नहुने उनले जानकारी दिए ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले जनताका काममा भएको ढिलासुस्तीमा प्रशासनलाई मात्र दोष दिन नहुने बताए ।बजेट बनिसकेपछि मात्र आफू पोखरा महानगरमा नियुक्त भएको भन्दै बरालले समस्याको पहिचान गरेर निकाश दिनेगरी काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको साझा लक्ष्य जनताको सेवा नै भएकाले एकढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने बरालले उल्लेख गरे । कतिपय अवस्थामा एउटा कर्मचारीले हेरिरहेको फाईल अन्य कर्मचारीले हेर्न नमिल्ने भएकाले पनि बिदा वा अन्य कुनै कारण कर्मचारी उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा सेवाग्राहीको काममा ढिलाई हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. आरसी लामिछानेले विकास जहिले पनि चलायमान हुने भएकाले भोलिका सन्ततिहरुले याद गर्ने किसिमको विकास आजको आवश्यकता भएको औँल्याए ।
बैठकमा पोखरा महानगरका ३३ वटै वडाका वडाध्यक्ष र सचिवहरुले चार महिनाको अवधिमा गरेका कामको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनीहरुले आफ्नो वडामा निर्माण भइरहेका भौतिक पूर्वाधारका कामहरु बाटोघाटो, बिजुली, खानेपानी, पुल पुलेसा विकास निर्माणका कामहरुबारे अवगत गराएका थिए ।
कोरोना भाईरस संक्रमणका कारण विकासका काममा सोचेजस्तो प्रगति हुन नसकेको उनीहरुको भनाई थियो । वडाध्यक्षहरुले वडाको विकास बजेट अपुग भएको, खाता सञ्चालन नहुँदा उधारोमा धेरै काम गर्नुपरेको गुनासो गरे ।
खासगरी गाउँविकास समितिबाट सिधै पोखरा महानगरमा गाभिएका वडाहरुले विकास बजेट थोरै भएको, जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको जस्ता समस्या सुनाएका थिए । चुनावमा आफूले गरेका वाचाहरु पूरा नहुने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको वडाध्यक्षहरुको गुनासो थियो ।
आज शुक्रबार : लक्ष्मी माताको पवित्र दिन, कस्तो रहनेछ राशिफल ?
आज क्रिसमस दिवस मनाइँदै